नारीचुली - योगमाया - RabinsXP Blog
नैनकलालाई आफ्नी आमाका कविता मुखाग्र भएकाले ती सबै शब्दहरू नैनकलाको सौजन्यमा पं. प्रेमनारायणले ‘श्री सर्वार्थ योगवाणी’ भनेर लिपिबद्ध गरे । योगमाया मुखमुखै कविता भन्न सक्ने आशुकवयित्री थिइन् । उनले वाचन
नेपाली साहित्यमा क्रान्तिकारी नारीहरूकी प्रतीक हुन् योगमाया । योगमाया नेपाली काव्यक्षेत्रकी एउटी सबल सर्जक हुन् । अनि योगमाया आफ्ना कवितालाई कथेर मुखाग्र भन्न सक्ने एउटी स्रष्टा हुन् । वास्तवमा बूढी औँठाको ल्याप्चेका भरमा आफ्नो हस्ताक्षर दिने योगमाया नै त्यस्ती आशुकवयित्री हुन् जसले जे देख्यो त्यही फररर भन्न सकिन्; जे भेट्यो त्यही विषयमा कविताबाट बोल्न सकिन् र जे सुन्यो त्यही विषयलाई कविताबाटै बिट मार्न सकिन् । छातीबाट उनले आफ्नो मुुटुलाई डँडेल्नोमा राखिन् र सामाजिक क्रान्तिका लागि खाली खुट्टा उचालिन् । योगमाया कुनै कथा, कविता र उपन्यासकी पात्र थिइनन्; उनी नेपाल अधिराज्यको पूर्वाञ्चलक्षेत्र भोजपुरस्थित दिङ्लाकी एउटी सांस्कृतिक क्रान्तिकी नर्सिङ्गा थिइन्, साहित्यकी उत्पादन थिइन् र अन्धविश्वासको कालो जालो भत्काउन कम्मर कसेकी एउटी प्रतिभा थिइन् ।
योगमाया त्यति बेला जन्मेकी थिइन्; जुन बेला नारीले रजस्वला हुनुअगि नै वैवाहिक जीवनमा बाँधिनुपथ्र्यो । त्यसैअनुरूप योगमायालाई पाँचै वर्षको उमेरमा उनका बुबा श्रीलाल न्यौपाने र आमा चन्द्रकलाले कन्यादान गरेका थिए । त्यस बेला योगमाया न्यौपानेको बिहे कोइराला (रामहरि) सँग भएको थियो । तर विधिको विडम्बना, यिनको बिहे भएको दुई वर्षमा यिनका पति स्वर्ग गए । सात वर्षीय योगमायाका लागि कोइराला (रामहरि) को मरण कुनै खासै पीडादायक विषयसूची बन्न सकेन । वास्तवमा बाललहरीमा उनी जति बिस्मात्मा डुबिन् त्यही क्षणका लागि मात्र त्यो विषय उनको जीवनको शोक बन्यो । उनीभित्रचाहिँ पतिमरणको खास कुनै चोट लाग्ने उनको अवस्थै थिएन । त्यसैले उनी फेरि आफ्नै बालक्रीडामा नै मिसिन थालिन् । यति हुँदाहुँदै पनि उनी विधवा घोषित भइन् ।
दिन छिप्ंिपदै जाँदा योगमायामाथि अनेक सामाजिक कुसंस्कारका वज्र ठोक्किन थाले । कतिसम्म भने तत्कालीन समाजबाट प्राप्त अपमान, घृणा र तिरस्कारका अनेक पीडाले उनको शरीर भरिन पुग्यो । कलिलो उमेरमा नै अलच्छिनी र पोइटोकुवीको लाञ्छनाले उनी रङ्गिन थालिन् । यिनै हृदयविदारक विषयहरूमा योगमायाको मन क्रमश: गाभिन थाल्यो । आफ्नै घर, गाउँ र समाजबाट प्राप्त लाञ्छनाका दर्दनाक र कटु शब्दहरू हृदयमा खेलाउँदाखेलाउँदै उनले सत्र वर्षमा टेकिन् ।
योगमायाले आफ्नो तरुनी मनको जोसलाई विवेकको होसले छेक्न, थाम्न र सम्हाल्न सकिनन् । वास्तवमा किशोरावस्थामा रन्थनिँदै जाँदा उनको शरीरले पनि प्रकृतिको वरदानलाई त्याग्न सकेन । उनी क्रमश: प्रणयसूत्रको खोजीमा आबद्ध भइन् । अनि गाउँको एउटा युवकप्रतिको आकर्षण उनको दिनचर्यामा अनुवाद हुन थाल्यो । जनकलाल शर्माका शब्दमा भन्ने हो भने योगमाया उनकै गाउँको डोटेल जैसी (प्रजापति) सित भागेर आसाम पुगिन् । भारतको आसाम पुगेपछि डोटेलदम्पतीले निक्कै परिश्रम गरे र घरजम पनि गरे । आसाममा डोटेल परिवार आफ्नो मिहिनेतले खुट्टा टेक्ने नै भएका थिए । त्यसै परिवेशमा यी दम्पतीबाट एउटी छोरीको पनि जन्म भयो । यिनीहरूकी छोरीको नाउँ नैनकला कायम भयो ।
केही वर्षपछि योगमायाले आफ्ना गाउँमा पुराण लाग्ने हल्ला सुनिन् । त्यसपछि डोटेलदम्पती१ छोरी च्यापेर पुराणस्थल पुगे । पुराण सुन्न उनीहरूले पनि पलेटी कसे । जनकलाल शर्माको ‘जोसमनी सन्त परम्परा र नेपाली साहित्य’ नामक ग्रन्थमा उल्लेख भएअनुसार पुराणको प्रसङ्ग थियो– “परस्त्री वा परपुरुष गमन गर्नाले भविष्यमा रौरवीय नर्कको यातना भोग्नुपर्छ ।” यस कुराले दुवैका मनमा चोट लाग्नु स्वाभाविकै थियो । तर यसको कुनै समाधान थिएन । यत्तिकैमा पुराणको अर्को प्रसङ्ग आयो “यदि अज्ञानवश कसैले यस्तो अपराध गरेको रहेछ र ज्ञान प्राप्त भएपछि त्यो अपराध त्याग्यो भने त्यसको प्रायश्चित्त हुन्छ अर्थात् रौरवीय यातना भोग्नुपर्दैन ।”
योगमायाले मन दिएर नै पुराणका सबै पाठ सुनिन् । पुराणको कथाले योगमायाको मन दस चिरा भयो । पुराण सुनेर उनी मनमनै रुन थालिन् । पुराणका कथा त्यति बेला उनलाई सत्य लागे । त्यसैले उनी पुन: आफ्नो पाप पखाल्ने हिसाबको रनाहामा रुमल्लिन थालिन् । त्यसपछि उनले आफ्ना पति (प्रजापति) डोटेलसँग यसबारे छलफल गरिन् । अनि यिनीहरूले एकअर्कामा छुट्टिएर बस्ने निर्णय गरे । त्यस बेला योगमायाकी छोरी नैनकलाचाहिँ योगमायासँगै बस्ने सहमति पनि भयो ।
योगमायाले पुराणमा आफ्नो मनमस्तिष्क जोडेपछि सांसारिक जीवनदेखि उनी वाक्क भइन् । यसै प्रसङ्गमा उनी संसारको मोहको मायाजाल निमोठ्न चाहन्थिन् तर सक्तिनथिन् । यस स्थितिमा पनि उनी आफ्नो हृदयान्तरको विस्फोट पोख्न छाड्दिनथिन् । त्यसैले उनले कविताका अक्षर प्रस्फुटन गर्न थालिन् । आमाका शब्द एकएक गमेर नैनकलाले आफ्नो मनमस्तिष्कको कम्प्युटरमा राख्ने गर्थिन् । वास्तवमा योगमाया जति कविता भन्थिन् नैनकला त्यति नै कण्ठाग्र पार्ने गर्थिन् । योगमाया र नैनकला दुवै निरक्षर थिए ।
योगमाया दिङ्ला पुगेपछि उनी चैतन्य महाप्रभुको कर्तृत्व र व्यक्तित्वको प्रचारमा लागिन् । साथै दिङ्लामा चैतन्य महाप्रभु अभयानन्दले गरेझैँ विशाल यज्ञ गर्न उनी जुटिन् । उनी कठिन योगसाधनामा लागिन् र धाराप्रवाह प्रवचन र कवितावाचन गर्न थालिन् । जनकलाल शर्माका अनुसार भोजपुरको दिङ्लामा १९९७ सालमा ठूलो यज्ञको आयोजना भएको थियो र त्यहाँ श्रद्धालु समाजको खूबै भीड लागेको थियो । तर त्यो यज्ञ सदाको भन्दा भिन्न थियो । उनले त्यहाँ
गरेका, गाएका र भनेका आधारमा नै उनका सृजनात्मक शब्दलाई उनकी छोरीका सौजन्यमा प्रकाशमा ल्याइयोे । त्यस बेलाका उनका ती भावनालाई उनका अन्य भक्तलगायत पण्डित प्रेमनारायणले परिष्कृत गरेर उनको कृति ‘श्री सर्वार्थ योगवाणी’ बाहिर ल्याएको पनि हुन सक्छ । उनको कृति जे जसरी प्रकाशमा आए तापनि उनको काव्यधाराका विषयमा जानिफकारहरूचाहिँ भन्छन्, अक्षरको खेती गर्न नजानेकी योगमायाले त्यस कालमा जुन भावना पोखिन् त्यो चाहिँ स्तुत्य थियो, आवश्यक थियो र अनुकरणीय थियो:
सा“चो बिन्ती गर्छु रत्तिभरि नढा“टी ।
योगमायाको पूर्ववर्ती जीवनमा पुगेर उनलाई अध्ययन गर्दा उनको भावना पश्चात्तापको घुमाउने दहमा घुमिरहेको देखिन्छ । आफ्नै मान्छेहरूबाट बहिष्कृत र तिरस्कृत भएर समाजमा रहनुभन्दा सांसारिक जीवनबाट अलग्गै रहेर भगवान्मा लीन हुनु उनका लागि सन्तोषप्राप्तिको विषय थियो । युवावस्थामा गाउँका पाखापखेरुमा कँडेल केटाहरूसँगको बसउठका घटना पनि उनका दिमागमा पूर्वस्मृति बनेर ओहोरदोहोर गर्थे । त्यतिमात्र होइन त्यस कालमा औपचारिक रूपमा दुई जनासँगको वैवाहिक जीवनका अनगिन्ती तीतामीठा प्रसङ्गले पनि योगमायाको मन हुँडलिरहे । त्यसरी उनको मन मर्नु न बाँच्नुको साँधमा उभिइरहेका बेला उनी स्वर्गद्वारी जाने तीर्थयात्रीका पछि लागिन् र स्वर्गद्वारी पुगिन् । उनी स्वर्गद्वारी गएताका स्वर्गद्वारीका चैतन्य महाप्रभु अभयानन्द द्वितीयले त्यहाँ प्रसिद्धि पाइसकेका रहेछन् । योगमाया पनि महाप्रभुका कृत्यबाट सुरुमा नै आल्हादित बनिन् । त्यही परिणतिले उनी पनि महाप्रभुका साथ सत्सङ्गमा समर्पित भइन् । योगमायाको आचरणले महाप्रभु पनि प्रसन्न बने । वास्तवमा योगमायाले महाप्रभुका हरेक गुणको अवलम्बन गरिन् । त्यसैले नै उनी चैतन्य महाप्रभुबाट दीक्षित पनि भइन् ।
अनेक साधना गरेर योगमाया ईश्वरीय शक्ति प्राप्त गर्ने कोटिमा स्थापित भइन् । आफ्नो जीवनलाई सार्थक पार्ने अभिप्रायले उनले वर्षौंवर्ष गुफामा नै बसेर पनि साधना गरिन् । जाडो दिनमा उनी आधा महिनासम्म अरुण नदीमा कम्मरसम्म डुबाएर साधनारत पनि भइन् । गर्मी महिनामा धुनी जगाएर आगाका रापसँगै उनले आफ्नो साधनाप्रधान कर्म पनि गरिन् । उनलाई न जाडो हुन्थ्यो न गर्मी हुन्थ्यो । वास्तवमा उनले एउटा विशेष ईश्वरीय शक्ति नै प्राप्त गरेकी थिइन् । कतिसम्म भने कुनैकुनै बिरामीलाई उनी आवश्यकता अनुसार नाडी समाएर र झारफुक गरेरै ठीक पारिदिन्थिन् । सर्पले ठुङेर मरणासन्न मान्छेलाई पनि उनले झारफुक गरेकै भरमा निको पारिदिन्थिन् ।
योगमाया एकातिर धार्मिक नसामा डुबेकी थिइन् भने अर्कातिर राणाशासनले जनमनमा आतङ्कित पारेको सामाजिक स्थितिबाट पनि उनी फुत्कन सकिनन् । श्री ५ लाई पिँजराको सुगा नबनाइयोस्, सतीप्रथा हटाइयोस्, जातभातको रीतिरिवाज हटाइयोस्, जनताले न्यायनिसाफ पाऊन् र शोषणरहित समाजको सृजना होस् आदि माग राख्तै योगमायाले सामाजिक परिर्वनका लागि सांस्कृतिक आन्दोलनको शङ्ख फुकिन् । उनी न्याय माग गर्दै पैदल हिँडेर काठमाडौं (त्यस बेलाको नेपाल) सम्म पनि आइन् । त्यतिखेर योगमायाका मागहरू पु¥याउन श्री ३ जुद्धशमशेरले उनलाई वचन पनि दिए । तर क्रमश: श्री ३ आनाकानीमै रुमल्लिन थाले । वास्तवमा योगमायाको सामाजिक समयसन्दर्भका जायज मागका कारण श्री ३ को मन नै धमिलिँदै थियो । त्यसैले श्री ३ ले न्याय दिने देखावटी वचन दिई अनेक प्रपञ्च रचेर उनलाई दण्ड दिने अभिप्रायले विभिन्न कदम चाले । तर निष्कर्षमा श्री ३ हारे र योगमायाको जित भयो । त्यतिखेर उनले जुद्धशमशेरको बेलाका दरबारिया विद्वान्हरूसँगको शास्त्रार्थमा विजय हासिल गरेकी थिइन् । स्वर्गद्वारीका चैतन्य महाप्रभुको शिक्षा, दीक्षा र ज्ञान योगमायाको मन, मस्तिष्क र विवेकको ढुकुटीमा शक्तिको स्वरूप भएर बसेको थियो । त्यसैले उनलाई हराउने पण्डितहरू बिरलै पाइन्थे । त्यस बेलाको उनको प्रचण्ड बौद्धिक शक्ति देखेर श्री ३ जुद्धशमशेर तीन छक्कै परेका थिए ।
योगमाया काठमाडौंबाट भोजपुर दिङ्लाको मझुवाबेंसीस्थित आफ्ना आश्रममा फर्केपछि झन् विद्रोही भइन् । त्यही विद्रोहको पराकाष्ठामा उनी कविता बोल्दै जान्थिन् र उनकी छोरी नैनकला आमाका ती शब्द कण्ठाग्र पार्दै जान्थिन् । वास्तवमा युवा अवस्थाकी योगमायाले स्वर्गद्वारीबाट दीक्षा लिएर दिङ्ला पुगेपछि चाहिँ धेरैजसो राजनीतिक काव्यको प्रस्फुटन गर्न थालेकी थिइन्:
महाराज छन् दरबारमा हेर्न आउ“दैनन्
दुःखी जनले निया“निसाफ सिधा पाउ“दैनन् ।
योगमायाको जन्म संवत् १९१७ सालमा भोजपुरको दिङ्लामा भएको थियो । बाँचुन्जेल उनले समाजका विकृतिहरू चिर्नमै समय लगाइन् । उनी जसरी धर्ममा डुबिन् त्यसरी नै समाजका कुसंस्कृतिको विरोधमा कुर्लिन् ।
उपस्थित सबै चेलाचेलीहरूलाई भनिन् “अब भक्तहरूले बाँच्ने युग छैन । अत: यसै यज्ञको समाप्तिका दिन पूर्णाहुतिका रूपमा यज्ञकुण्डमा प्रवेश गरेर अग्निसमाधि लिनुपर्छ ।” योगमायाको घोषणाअनुसार त्यसै बेला उनका दुई सय चालीस जना भक्तहरूले यज्ञकुण्डमा हामफाली प्राण त्याग्ने निर्णय गरे ।
योगमायाका अग्निसमाधिसम्बन्धी घोषणा र यज्ञकुण्डमा ज्यान अर्पण गर्न जुर्मुराएका उनका अनुयायीका विषयले भोजपुर हल्लियो । त्यहाँबाट त्यो खबर पहाडका ढिस्काढिस्का, कान्लाकान्ला र थुम्काथुम्का हुँदै धनकुटामा रहेका राणाका कारिन्दा माधवशमशेरका कानमा पनि पुग्यो । परिणामस्वरूप राणाका निर्देशनअनुसार सेनाले त्यो यज्ञकुण्ड आफ्नो नियन्त्रणमा लियो । माधवशमशेरलाई के निहुँ पाऊँ, कनिका बुकाऊँ भइरहेको अवस्थामा योगमाया त्यति बेला उनका लागि चिट्ठा नै परेकी थिइन् । त्यसैले माधवशमशेरका निर्देशनमा योगमायाका हातगोडामा नेल ठोकियो । अनि योगमायालगायत उनका भक्त र अनुयायीहरूलाई सरासर जेल चलान गरियो । महिलाजति तीन महिना जेलखानामा बसे भने पुरुषहरूचाहिँ साढे दुई वर्षसम्म कैदी भए । त्यस काण्डले पण्डित प्रेमनारायण पनि अठार महिना जेलखानामै कोचिए ।
त्यसबखत राणाका सिपाहीको बन्देजका कारण योगमाया यज्ञकुण्डमा हाम फाल्न पाइनन् । त्यसपछि आफ्ना भक्तहरूलाई पछि लगाएर उनी अरुण पुगिन् । ज्ञानमणि नेपालका अनुसार “योगमाया अरुण किनाराबाहिर मझुवाबेसीमा संवत् १९६६ तिर एक कुटी बाँधेर बस्न लागिन् । उनकी एउटी भाइबुहारी गङ्गा (न्यौपाने) चाहिँ उनकी पक्का भक्त भइन् । यी गङ्गा प्रेमनारायण (योगमायाका भक्त) कै दिदी थिइन् ।” यी गङ्गा पनि योगमायासँगै बस्थिन् । अरुण नदीको किनारामा उभिएर फेरि योगमाया बोलिन् “हामीलाई अग्निप्रवेशमा सरकारले बाधा ग¥यो । तर आजको दिन अग्निको अभावमा जलसमाधि लिनु पनि उत्तिकै लाभदायी हुनेछ । अत: इच्छा हुनेले मेरो अनुकरण गर्नु ।” त्यसपछि योगमायाले उर्लंदो अरुणको भेलमा हाम फालिन् । उनका अनुयायीहरू पनि क्रमश: जलसमाधिमा सहभागी हुँदै गए । हुँदाहुँदै त्यस बेला जलसमाधि लिने नारीपुरुषको सङ्ख्या ६८ पुगिसकेको थियो ।६ त्यसपछि त्यहाँ कतिले हाम फाले र कति घर फर्के ? कसैले त्यसको तथ्याङ्क राख्न सकेन; किनभने त्यस बेलासम्ममा त्यहाँ पनि राणाका फौज पुगिसकेका थिए ।
योगमायाको धार्मिक कार्यशैली नै आकर्षक थियो । उनी धुनी बालेर, रुद्राक्षको माला लगाएर, बिगुतको तीन धर्के टीका लगाएर र झाँक्रो फिजाएर आफ्नो आसनमा बस्थिन् । साथै उनका छेउमा पाँचछ फुट उचाइको त्रिशूल ठड्याइन्थ्यो । त्यहीँ बसेर उनी आँखा चिम्लेर धाराप्रवाह धार्मिक र सामाजिक प्रवचन दिन्थिन् । उनको साहस देखेर उनका सेवकहरू भक्तमा रूपान्तरित भए । हरे राम प्रभुका नाउँले परिचित स्वामी पं. प्रेमनारायणले चारैतिर डुलेर योगमायालाई औतारी शक्तिमाताको नाउँले प्रचार गरे । स्वामी प्रेमनारायणले योगमायाका नालीबेली पूर्वी पहाडका रनबन पु¥याए भने काठमाडौं उपत्यकामा पनि उनले योगमायाको यथेष्ट प्रचार गरे । त्यतिमात्र होइन; योगमायाका भक्त चेलाहरू पं. कविप्रसाद गौतम र लोचननिधि तिवारीले पनि योगमायालाई शक्तिमाताका रूपमा स्थापित गराए ।
योगमायाले जीवनमा आपूmप्रति खप्टिएका प्रत्येक वचनको स्मरण गरिरहिन् । उनले नारीप्रतिको भेदभावका विषयमा विरचित पुराणका कथाहरूको पनि खुलेर नै आलोचना गरिरहिन् । नारीलाई पशुवत् व्यवहार गरेर रचिएका धार्मिक कथाहरू योगमायाका भावनाका शत्रु थिए । वास्तवमा लोग्नेमान्छेले जति स्वास्नी राखे पनि हुने आइमाईले चाहिँ अर्को पुरुषसँग बिहे गर्दैमा ऊ समाजबाट बहिष्कृत हुनुपर्ने जस्ता असमान र भेदभावपूर्ण बेहोराले उनको मन रन्थनिएको थियो । त्यतिमात्र होइन; बाहुन पुरुषले पानी नचल्ने जात ल्याए पनि जात नजाने र बाहुन स्त्रीले चाहिँ आपूmखुसी बाहुनैसँगै बिहे गर्दा पनि जुनीभरि बिटुली हुनुपर्ने अवस्थाको उनले घोर भत्र्सना गरिन् । साथै बाहुन नारी तल्लो जातमा पुग्नेबित्तिकै उसले आफ्नो संस्कारबाट हात धुनुपर्ने स्थितिको पनि उनले विरोधै गरिन् । यी सबै परिवेश जोडेर उनले पुन: कविता बोलिन्–
धर्म छाड्नु क्या हो भने आपूm निया छोडी
ब्राह्मणहरू बन्न लागे शूद्र जात्का जोडी
कुन्कुन् जातले जुन्जुन् ल्याउ“छ जात्ता मिलाऊन् ।
उनी समाजका दुःखीपीडितहरूको पक्षमा लागिन् र सरकारसँग गर्जिएकाले उनी बेलाबखत सरकारको आँखी पनि भइन् । उनी नेपाली समाजमा एउटी विद्रोही स्रष्टाका रूपमा सुपरिचित भइन् । वास्तवमा त्यति बेलाको त्यो सत्य घटना पनि आज एकादेशको दन्त्यकथाझैँ मानिन्छ । समाजको त्यही कठोर शासनप्रति विद्रोहको चरम स्वर उराल्ने क्रममा उनले संवत् १९९८ असार २२ गते शनिबार आषाढशुक्ल एकादशीका दिन आफ्ना अनन्य भक्तहरूसमेतलाई समेटेर जलसमाधि लिएकी थिइन् ।